Rakikira vaovao :: Namoaka ny « gasyTsara » i Arison Vonjy • AoRaha
Rakikira vaovao Namoaka ny « gasyTsara » i Arison Vonjy
“Masa-bary maito kitoza” i Arison Vonjy sy ny namany ka namoaka ny rakikirany fahatelo, mitondra ny lohateny hoe: « gasyTsara ». Manokana ary miavaka ity vokatra vaovao ity satria mirakitra ireo hira miisa iraika ambin’ny folo niangalian’ny tarika an-tsehatra tao amin’ny American Center Tanjombato, tamin’ny taona 2017.
Ahitana lohahevitra ny « gasyTsara ». Asongadiny ny raharaham-pirenena sy ny resa-pitiavana. Ho hita sy ho re ao anatin’ny kapila ireo hira manainga fanahy sy manaitaitra sofina nankafizan’ny olona an’
i Arison Vonjy, toy ny « Tsy foiko » sy « Fifonako ». Ho tazana ao koa ireo miredon dredona, toy ny «gasyTsara » sy “ m’fampiantso eo”.
Ankoatra an’i Arison Vonjy, nihira sy nitendry gitara, dia ahitana fandraisana anjarana mpitendry maromaro teny an-tsehatra. Dovs Rakotondraina teo amin’ny vata maroafitsoka sy ny fitondrana ankapobeny ny mozika. Nali Rabarison nively ny ampongamaroanaka sady nizaha akaiky ny lafiny feo. Nifandimby tamin’i Arison Vonjy teo amin’ny gitara beso sy ny « mélodica » kosa i Hatry Andriambelo. « Efa nofinofiko hatramin’ ny ela ny hanao rakikira raisim-peo an-tsehatra miaraka amin’ny mpijery. Misy hafaliana mipololotra hafa mihitsy amin’iny fotoana iny », hoy i Arison Vonjy. Araka ny vina napetraky ny tarika, hoentina an-tsehatra etsy amin’ny Institut français de Madagascar (IFM) Analakely ny “gasyTsara”. Aorian’izay, hisy fitetezam-paritra.
Mozika misafo sofina
Anarana niainga tany amin’ny taona 1987 ny hoe Arison Vonjy. Maro ny mpitendry sy mpanakanto andrarezina niarahany niasa, tao anatin’izay 30 taona nanaovany zavakanto izay. Anisan’ny nandraisany traikefa ry Tôty, Samy Andriamanoro, Datita, Seta Ramaroson, Silo… Efa namoaka ny vokatra: “Feno loatra” sy “V.O” izy. Tapa-kevitra ny hilalao mozika misafo ny sofin’ny mpihaino kokoa i Arison Vonjy ( fitendry, tononkira…). Nitsiry niaraka tamin’izay koa ny faniriany hanao rakikira vaovao haneno “funk” izay ho laroina gadona gasy. Nanampy betsaka azy ireo tamin’ny fanamafisana ny ritsoka gasigasy io i Tiana Rainitelo. “Niverina tamin’ny fitiavako mozika tendrena aho rehefa tsapa fa voavolavola ny hira rehetra. Tonga amin’ny niketrehana azy ny rakikira ka zaraina amin’ny rehetra”, hoy i Arison Vonjy.
Fampitambarana kanto :: Hanavao ireo mozika nentim-paharazana ny tarika Gasy 4
Mozika « Rock » :: Hiaka-tsehatra indray ny tarika Green